ग्रान्डी अस्पतालको ला’परबाहीले नौ महिनामा पाँचपटक टाउकोको श’ल्यक्रिया गरेपछि… Bishal4You
ग्रान्डी अस्पतालको ला’परबाहीले नौ महिनामा पाँचपटक टाउकोको श’ल्यक्रिया गरेपछि…
काठमाडाैँ १० पुस- ग्रान्डी अस्पतालको ला’परबाहीका कारण यतिखेर काठमाडौं लैनचौरका सञ्जीव न्यौपानेको परिवारले निक पी’डा भोगिरहेको छ। चिकि’त्सकीय ला’परबाहीका कारण न्यौपानेको १८ महिने छोरा रिहान न्यौपानेको जीवन जो’खिममा परेको छ। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको गलत उपचारका कारण उनको यो अवस्था आएको हो भनेर आजको नयाँ पत्रिकामा अर्जुन अधिकारीले खबर लेखेका छन्। सामान्य अवस्थामा जन्मिएको शिशुमा अस्पतालजन्य संक्रमण फैलियो। सं’क्रमण बढ्दै गएपछि शिशुमा मेनिनजाइटिस भयो।
संक्रमणकै कारण मस्तिष्कको एक भाग विकास भएन। शिशु सामान्य रहेको भन्दै न्युरो सर्जन डा. अमित थापाले ९ महिनामा बालकको टाउकाको पाँचपटक श’ल्यक्रिया गरे। डा. दीपिका ढकालले शिशुलाई अवाश्यकभन्दा बढी प्यारासिटामोल खुवाउन सिफारिस गरिन्। शिशु क्रमशः अपांग मात्रै भएनन्, मृ त्यसँग लडि’रहेका छन्। उपचारमा ला’परबाही भएको उ’जुरीका आधारमा काउन्सिलले अनुसन्धान गर्यो, तर अस्पताल र सम्बन्धित चिकि’त्सकलाई सचेत मात्रै गराएर छाड्यो। अस्पतालले गरेको ला’परबाहीबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धानपछि कम’जोरी भएको पुष्टि गरे उपचारमा ला’परबाही गर्ने चि’कित्सक र अस्पताललाई कारबा’हीबारे प्रस्टसँग सिफारिस नगर्दा उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
मस्तिष्क विकास नभएको शिशुलाई नौ महिनाको बीचमा अस्पतालका न्युरो सर्जन डा. अमित थापाले पाँचपटक श’ल्यक्रिया गरेका थिए। रिहानका बुबा सञ्जीवले गलत उपचारले शिशुको ब्रेन विकास नभएकाको अवस्थामा समेत चिकित्सकले सुधार हुँदै छ भन्दै ढाँटेको आ’रोप लगाए। उपचारमा भएको ला’परबाहीका कारण रिहानको टाउकोसमेत ‘भी’ आकारको बनेको छ । १३ वैशाखमा सर्लाहीकी पाँच वर्षीया आकृतिकुमारी साहमा मुटुको समस्या देखिएपछि बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना गरियो । ‘ओ पोजेटिभ’ रगत भएकी उनलाई श’ल्यक्रियाका क्रममा चिकि’त्सकले ‘ए पोजेटिभ’ रगत चढाए ।
यही कारण २३ वैशाखमा उनको मृ’त्यु भयो । बालिकाको उपचारमा अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माको युनिटमा डा. रवीन्द्रभक्त तिमिला र डा. नवीनचन्द्र गौतम संलग्न थिए । उपचारमा संलग्न तीनैजना चिकित्सकसहित कर्मचारीविरु’द्ध उ’जुरी दिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धानपछि अस्पताल र चिकि’त्सकलाई दो’षी देखायो, तर का’रबाही भने भएको छैन । – गत जेठ अन्तिम साता ओम अस्पतालमा पत्थरीको श’ल्यक्रिया गर्दा सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती–१० की ५० वर्षीया रामप्यारी थापाको नि’धन भयो । श’ल्यक्रियाका क्रममा पेटको आन्द्रा काटिएको, तर त्यसै छाडिदिँदा संक्रमण फैलिएर उनको मृ’त्यु भयो ।
डा. रविन कोइराला नेतृत्वमा उनको श’ल्यक्रिया भएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा मृ’तकका आफन्तले उ’जुरी दिए, तर ती चिकित्सकमाथि कुनै का’रबाही भएन । – ११ फागुन ०७४ मा नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा कार्यरत दुई चिकित्सकले चितवनकी ३८ वर्षीया विन्दु पौडेलको देब्रे खुट्टाको अपरेसन गर्नुपर्नेमा दाहिने खुट्टाको अपरेसन गरिदिए । अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रवीण नेपाल र डा. शैलेज रञ्जितकार श’ल्यक्रियामा सहभागी थिए । उपचारमा लाप’रबाही गरेको भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई एक महिना निलम्बन गर्‍यो ।